155CM High-ọkwa Dollhouse 168 Mmekọahụ Mmekọahụ Soro
Zute antlọ Gị Dollhouse 168 High-ọkwa 155CM Mmekọahụ Mmekọahụ
Dolmụ bebi mmekọahụ nwere ike ijere gị ozi. Site na mmepe nke ụmụ bebi ndị a, ị nwere ike nweta ihe ị chọrọ na ọnụahịa dị oke ọnụ. Nke a bụ 155cm ogologo nwa bebi, si na Dollhouse 168 ika. Achọrọ m ka ị họrọ ngwaahịa kachasị amasị gị ebe a. Mgbe anyị nwere ike ghara inwe mmekorita anụ ahụ na ndị ọzọ ogologo oge, ọ na-esiri gị ike ịgwa onye òtù ọlụlụ gị echiche efu gị? Nwere ike ịdabere na bebi mmekọahụ iji nweta obi ụtọ mmekọahụ.